Ciidanka Wayaanaha oo Go’doomiyay Magaalada Gonder, Sababta. | ogaden24
Ciidanka Wayaanaha oo Go’doomiyay Magaalada Gonder, Sababta.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Gonder ee Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in ay ciidanka wayaanuhu go’doomiyeen guud ahaanba magaalada Gonder ee woqooyiga Gobolka Axmaarada.
Sida xogta aan kuhelayno ciidamada gumaysiga Itoobiya oo wata baabuurta gaashaaman ayaa gooyay dhamaan jidadka soogala magaalada Gonder, iyagoo baadhitaan xoog leh kusamaynayay dhamaan gaadiidka magaalada soogalayay iyo kuwa kabaxayayba.
Ciidanka wayaanaha ayaa sidoo kale lasheegayaa in ay dadwaynaha gaadiidka saaran marinayeen baadhitaan xoog badan iyagoo sida lasheegay qaadanayay wixii lacag ama Mobel ah oo ay dadku wataan, waxaana lasheegayaa in ay jiraan dad badan oo xabsiyada lootaxaabay.
Howlgalkan ay ciidanka wayaanuhu sameeyeen ayaa lagu macneeyay mid lagaga jawaabayay dagaalkii maalintii daraad kadhacay deegaan aan ka fogayn magaalada Gonder, halkaas oo ciidamada wayaanaha cashiro lama ilaawaan ah loogu dhigay.
Taliska khalkhashan ee wayaanaha ayaa u arkay in hubkii dagaalka lagaga qabsaday ciidankiisa lasoo galin doono magaalooyinka waawayn waana sababta keentay in ay qaadaan baadhitaanka intaas la’eg.
Sidoo kale taliska wayaanaha ayaa aaminsan in ay dadwaynuhu taageero wayn uhayaan jabhadaha hubaysan, isla markaana ay siiyaan hub iyo ciidanba, wuxuuna talisku siwayn isha ugu hayaan dhalinta kudhaqan Gobolada ay jabhaduhu kajiraan.